Ireo lalao telo sarotra indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny lalao sarotra indrindra ho an'ny Android
Ny fifantenana ny lalao misy amin'ny Android dia mitombo isan'andro. Ho fanampin'izany, mahita lalao amin'ny karazana rehetra isika, noho izany dia mora ho an'ny rehetra ny mahita zavatra izay tiantsika. Misy ireo mpampiasa maniry lalao izay mihaika azy ireo. Zavatra sarotra. Raha iray amin'ireo mpampiasa ireo ianao dia manana vaovao tsara izahay. Satria manana safidy amin'ny lalao sarotra indrindra ho an'ny android.
Lalao izay mametraka fanamby ho an'ny mpampiasa ary tsy ho ela dia hataon'izy ireo ho mora aminao. Noho izany dia mila miomana amin'ny fotoana rehetra ianao handresena azy ireo amin'ny fomba mahomby. Vonona hanaiky ireo fanamby atolotry ny lalao ho antsika ve ianao?
Ireo dia lalao manana fitomboana eo amin'ny Google Play. Satria tolo-kevitra tany am-boalohany izy ireo ary tsy isalasalana fa manome zavatra hafa amin'ny panorama ny lalao azo alaina ho an'ny Android izy ireo. Noho izany dia mamita ny tolotra misy amin'izao fotoana izao. Lalao inona avy no nahatonga an'io lisitra io?
1 Mpangalatra mahagaga
2 BBTAN hatramin'ny 111%
3 Super hexagon
Ity lalao ity a fifangaroana tsara eo anelanelan'ny sarotra nefa mampiankin-doha. Hatramin'ny nanombohanao dia ho hitanao ny fomba tsy tianao hijanonana mandra-pahatonganao mandroso eo. Tena tiako ilay vinavina ary izany dia lalao iray izay mazava tsara amin'ny fomba rehetra ny fandidiana. Ny tokony hataontsika dia ny mitsambikina, ary mitsambikina haingana dia haingana mba hahafahantsika mandroso mandritra ny lalao. Ny olana atrehanao dia ny hoe tokony ho haingana be amin'ny fotoana maro ianao. Zavatra izay mahatonga azy tsy ho tsotra loatra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
BBTAN hatramin'ny 111%
Miroso amin'ny lalao amin'ny estetika tena arcade isika fa amin'ny taratasy dia toa tsotra izany, na dia ny tena izy dia tsia. Miorina amin'ny fomba lalao izay efa hitantsika imbetsaka. Tokony hataontsika manapaha entana amin'ny baolina, Tsy dia misy mistery loatra ilay fandidiana. Saingy, ny fahasarotana dia ny fahazoana lavitra araka izay tratra. Satria mihasarotra be izy io. Mila manafoana ny kianja amin'ny kapoka isan-karazany isika. Ka ny fanalahidy dia ny fanangonana baolina hanafoanana ny kianja faran'izay betsaka. Fanamby tena mampiala voly ary inona no hanantona anao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao sarotra amin'ny Android ity. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra.
Fahatelo hitantsika ny iray amin'ireo lalao craziest sy samihafa misy amin'ny Android. Lalao iray izay voahodidin'ny hexagon iray amintsika. Saingy, ny lafiny samihafa dia hanakaiky antsika tsikelikely, misy hafainganam-pandeha hafa. Ny adidintsika dia ny fisorohana azy rehetra. Fa mazava ho azy, ny hafainganam-pandehanan'izy ireo manatona antsika no mahasarotra azy. Koa satria amin'ny tranga sasany dia haingana dia haingana izy io. Ka saika tsy azo atao mihitsy. Ho fanampin'izay, ny mozika eo amin'ny lalao dia manampy betsaka ihany koa amin'ny fahatsapana faingam-pandeha. Raha ny tena izy, amin'ny tranga sasany dia manampy anao hanao hadisoana izay tsy handalovanao ny lalao. Tsy isalasalana fa fanamby goavana.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 2,69 euro. Saingy, aorian'io fandoavam-bola io dia tsy mahita doka na mividy ao anatiny izahay.
Ireo lalao telo ireo dia santionany tsara amin'ny zavatra misy amin'ny lalao sarotra amin'ny Android. Izy rehetra dia manana olana izay mandroso amin'ny hafainganam-pandeha ao anatin'ny lalao. Saingy, samy manana ny maha izy azy izy rehetra tena mampiala voly sy mampiankin-doha. Ka te-hilalao hatrany ianao mandra-pahatonganao mandroso sy mandroso ny lalao. Noho izany dia mila manam-paharetana amin'izy rehetra ianao ary mahazo ny tsara indrindra amintsika mba hahafahantsika mandalo azy ireo. Satria tsy hanamora antsika amin'ny fotoana rehetra izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao sarotra indrindra ho an'ny Android
Super Mario Run dia nihoatra ny 100 tapitrisa alaina
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Mario Kart amin'ny Android